China American American Round Lunch Box 700ML mpanamboatra sy mpamatsy | XINLONG
Xinwu Zone Development Economic, Wuhu County, Anhui
Andiana boaty fisakafoanana boribory
Andian-boaty fisakafoanana mahitsizoro
Andiana boaty fisakafoanana marobe
Andianà boaty fisakafoanana amerikana
Seranana boaty fisakafoanana japoney
Andiana boaty saosy
Andiana antsy, fork ary sotro
Vata fisakafoanana boribory
Sakafo atoandro mahitsizoro amerikana ...
American Box Lunch Box650ML
Kitapo fisakafoanana an-tsokosoko boribory 1 ...
Ny orinasanay dia nandrakotra velarantany 8000 metatra toradroa. Ny sandan'ny vokatra isan-taona dia nihoatra ny $ 15 tapitrisa ary nitombo tsy an-kijanona tamin'ny hafainganam-pandeha avo lenta isan-taona.
Toerana niandohana Wuhu, Anhui, Sina Anaran'ny marika XINLONG
Laharana maodely XL700 fahafahana 24OZ / 700ML
Size 180 * 55 * 140mm lanja Tokony ho 34g
andian-dahatsoratra American Style Round
Sakafo atoandro miaraka amin'ny fonony Dome Loko Mangarahara / mainty
fotony fotsy misy fonony mazava
ara-nofo Sakafo PP endri-javatra Fanary, Sariaka tontolo iainana
Sehatra fampiharana Toeram-pisakafoanana, fivarotana voankazo,
Sakafo Snack, Supermarkets sns. Fampiasana Mikraoba, Fitaovana vaovao, fitehirizana
Kaomandy manokana MANAIKY Vidiny Mifaninana
Namboarina Tongasoa i OEM Anaran'ny vokatra Plastika PP azo ariana
Boaty fonosana Sakafo ara-tontolo iainana
Antsipirian'ny fonosana 150 pcs / ctn ho an'ny famonosana betsaka, 50lids kitapo plastika / 50bodies kitapo plastika. Avy eo atsofohy ao anaty baoritra taratasy ivelany
Aseho ny vokatra
Zahao ireo fiasa FANTASTIKA ireo!
* Microtre azo antoka
* Maharitra (Tsy misy triatra, kapoka na vano)
* Azo antoka (tsy misy BPA)
* Azo antoka ny fanasana vilia
160,000 pcs / 20FT; 335,000pcs / 40FT; 375,000 pcs / 40HQ
Manodidina ny herinandro, miorina amin'ny qty
T / T na L / C amin'ny fahitana
Wuhu Xinlong Plastic Co., Ltd dia manufacrurer matihanina amin'ny fitoeran-tsakafo azo ampiasaina. Orinasa mitambatra izahay izay misy endrika, famolavolana, famokarana, varotra ary serivisy ho an'ny mpanjifa.
Misy mihoatra ny 50 morden fitaovana famokarana mekanika, milina isan-karazany ary fitaovana famolavolana matihanina ao amin'ny orinasa.
Miaraka amin'ny kalitao tsara, endrika tsy manam-paharoa, vidiny azo ekena ary ekipa matihanina, ny vokatra serial dia aondrana any amin'ny firenena 50 manerantany.
Manantena ny fiaraha-miasa aminao!
1. Manana ny ozinanao manokana ve ianao?
Ie. Ny orinasan-tsika sy ny foibenay dia samy miorina ao Quanzhou City, faritanin'i Fujian, Sina. Ny vokatra rehetra dia novokarinay ary amidinay irery. Miarahaba antsika hitsidika ny ozininay.
2. Ahoana no hahazoako ny teny nindraminao faran'izay haingana?
Azonao atao ny mandefa hafatra amiko amin'ny TradeManager, WhatsApp, Skype, Wechat na mailaka hilaza amiko ny fepetra takiana amin'ny antsipiriany. Handefa ny tolotra tsara indrindra ho anao izahay mandritra ny 12 ora fiasana.
3. Azoko aloha ve ny santionanao?
Ie. Aorian'ny nanamafisana ny modely sy ny santionany, afaka manome santionany maimaimpoana izahay hanombanana ny kalitao, ny lamina, ny fitaovana, ny lokony. Haverina ny entana raha vao napetraka ny baiko.
4. Afaka manome serivisy OEM & ODM ve ianao?
Ie. Momba ny OEM, azonao atao ny manamboatra ny vokatra, toy ny fanontana ny sary famantarana eo aminy, manokana ny habeny, ny loko, ny fitaovana, ny lamina ary ny fonosana.
Momba ny ODM, misy ekipa matihanina manana traikefa goavambe amin'ny famolavolana boaty plastika sy ny famokarana ao amin'ny orinasa. Lazao anay fotsiny ny hevitrao dia hanampy izahay hanatanteraka.
5. Maharitra hafiriana ny famokarana betsaka?
Raha ny marina dia miankina amin'ny habetsahan'ny filaharana sy ny vanim-barotra. Amin'ny ankapobeny 15 ~ 20 andro aorian'ny fanamafisana ny baiko.
6. Azoko atao ve ny manamarina ny kalitaon'ny entana alohan'ny fanaterana?
Eny, Tongasoa eto hitsidika ny orinasa misy anay na hanome alalana antoko fahatelo hijerena ny kalitaon'ny entana alohan'ny fandefasana.
Aza misalasala mifandray aminay. Misy fitenenana sinoa manao hoe: Fahafinaretana foana ny miarahaba ny namana lavitra. Ary hanompo anao izahay amin'ny fotoana rehetra.
Teo aloha: Takelaka voankazo
Manaraka: Vata fisakafoanana boribory
American Box Lunch Box 1000ML
American Box Lunch Box 900ML
Miaraka amin'ny karazany maro, kalitao tsara, vidiny mirary ary volavola azo ampiharina, ny vokatray dia eken'ny besinimaro sy atokisan'ny mpanjifanay, miaraka amin'ny fahamendrehana. Kalitao.